Ny Antoko MARINA, rehefa nandinika sy namakafaka ny fiainam-pirenena sy ny zava-misy iainan’ny Malagasy ankehitriny dia:
1- Mahatsapa fa mila fanovàna lalim-paka ny firenena. Mahantra olo-marina isika, mahantra olom-pirenena sy mpanao politika ary mpitondra manam-panahy sy fahendrena hanasoa ny mpiara-belona. Tsy misy afaka hanova raha tsy miova ary sarotra ny manarina raha tsy eo ny olo-marina.
2- Resy lahatra fa teo amin’ny tantara, hatrany amin’ny Repoblika voalohany ka hatramin’izao, ny fifidianana dia tsy tena nahafahan’ny vahoaka Malagasy nanao ny fanovàna tiany ho natao. Izay eo amin’ny fitondrana hatrany no mahazo tombony amin’ny fifidianana satria Andrimpanjakana sy rafitra azony baikoina sy lalaovina no nikarakara sy nitsara ireny fifidianana ireny. Noho izany, mialoha ny hiheverena hanaovana fifidianana dia takian’ny Antoko MARINA ny :
- Fanavaozana manontolo ny lisi-pifidianana ka Filoham-pokontany voafidin’ny vahoaka mivantana no hitarika ny fanaovana izany eny ifotony. Ny lisitra mivoaka avy eny ifotony no omen-kasina raha sanatria misy fiovàna ny lisitra voadika avy any amin’ny Distrika.
- Fanavaozana manontolo ireo Rafitra mikarakara sy mitsara fifidianana ka ahena araka izay azo atao na foanana mihintsy aza ny fisian’ny olon’ny fitondrana amin’ireny mba hananany fahaleovantena tanteraka amin’ny fanapahan-keviny sy hanafoanana ny tsindry avy amin’ny mpitondra.
- Fandrafetana lalàna vaovao mifehy ny fifidianana manome antoka fifidianana madio, marina, manome hasina ny fahafahana misafidy malalaka sady mampitovy lenta ireo mpilatsaka hofidiana.
- Fametrahana loharanom-bola avy amin’ny Malagasy madiodio hikarakarana ny fifidianana mba hialana amin’ny fitsabahan’ny vahiny amin’ny raharahan’ny Malagasy toa maha very hasina ny fiandrianam-pirenena
- Fandrafetana lalàna mifehy ny famatsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra ataon’ny mpilatsaka hofidiana mba tsy ho sanatria fividianana no hatao fa tena fifidianana.
Rehefa mahazo antoka ny olom-pirenena fa afaka manao fanovana amin’ny alalan’ny fifidianana izy, tsy hidina eny an-dalambe intsony. Ny fidinana an-dalam-be mantsy sisa no hany lalana hitany teo aloha rehefa tratra ny fetra tsy azo nihoarana.
3- Manao antso avo amin’ny olom-pirenena , ny vondron’ny olom-pirenena rehetra fa fotoana izao : “Aoka isika Malagasy no handray an-tanana ny fiainam-pirenentsika Malagasy”. Tsy azo ialana intsony ny fifanatonana eo amin’ny samy Malagasy, tsy azo ihodivirana ny fifampidinihina, tsy maintsy manapa-kevitra iombonana isika manoloana ny olana samihafa sy disadisa misy amin’izao fotoana izao. Fanapahan-kevitra miainga amin’ny antomotr’ezaka mizotra mankany amin’ny lavitr’ezaka no raisina ka ny lafi-piainan’ny firenena manontolo no dinihina amin’izany: Toe-karena (Vola, harena ankibon’ny tany, harena voa-janahary, fampandrosona ny tantsaha, ZES, fananan-tany…), ny Sosialy (Fahasalamana, tsy fanjarian-tsakafo, olana sendikaly, fampianarana, fampananan’asa…), ny Kolontsaina, ny Politika anatiny sy ivelany (Ireo Nosy Malagasy, ny Fiandrianam-pirenena, Rafi-pitondrana sahaza ny Malagasy…)
Ny fanapahan-kevitra mivoaka amin’izany no harafitra ho Dina sy Veliranon’ny samy Malagasy ifamatoran’ny olom-pirenena sy ireo rehetra izay mihevitra hitondra.
4- Nanapa-kevitra fa handray anjara amin’ny dinika rehetra ifanaovan’ny samy Malagasy hahatongavana amin’izany fanovàna sy fiovàna lalim-paka takiana izany ka vonona hitondra ny heviny amin’ireny sehatra ireny ho fampandrosoana ny Firenena iaraha-manana.
Namaky ny fanambarana nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety dia i Désiré Ranaivoson.